Izindlela zokupheka zesaladi zeLentil zilula futhi zimnandi ngesithombe > Ukudla ngesifo sikashukela
Isaladi eluhlaza le-Lentil eluhlaza ilula futhi inambitheka
Incazelo ephelele ngokuphelele: Izindlela zokupheka isaladi lentil zilula futhi zimnandi ngezithombe zabafundi bethu abathandekayo.
Noma yiluphi uhlobo lwensimbi lufanele isaladi, kodwa kubalulekile ukuthi ungayigwinyi iphalishi. Uma upheka ama-lentils aluhlaza waseFrance, akudingeki ukhathazeke ukuthi kuzophuka. Kuzo zonke izinhlobo, oluhlaza ngokwalo luyamelana nokugaya. Ukupheka insimbi yaseGibhithe ensundu nokubomvu, kuzothatha isikhathi esincane kakhulu. Kwanele ukwehlisa okusanhlamvu emanzini abilayo, sinciphise ukushisa bese ulinda imizuzu engu-5 ukuya kwengama-10. Amagilebhisi kufanele aqhubeke ephekwe kancane. Ukugqoka okulula kakhulu ingxube yamafutha yemifino nejusi kalamula.
Engxenyeni ethi "Lentil Salads" 63 zokupheka
Ngifunde okuningi ngokubaluleka kwezithombo, kodwa angikaze ngizizame. Nginqume ukuthi kungcono ukukwenza nokuzisola kunokuthi kamuva ngizisole ngalokho okungazange kwenziwe. Ngabheka imigqomo yami, i-lentils - ukuphela kwento ongazama ukuyikhulisa. Ngenze futhi angizisoli ...
Isaladi elifudumele le-lentuga le-lentil ngethanga nepelepele elimnandi
Isaladi elifudumele le-beluga elifudumele elinemifino ebhakiwe yisidlo sasemini esiphelele (noma isidlo sakusihlwa). Amagilebhisi apheka ngokushesha futhi anambithe ukhilimu omuncu. Ngakho-ke, kuzosizakala ngokufakwa kwemifino ebhakwe enambithekayo nephunga elimnandi - ithanga noshukela ...
ilensi e-brown noma eluhlaza (kuphekwe), ilayisi (kuphekwe), isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi (oqoshiwe), izaqathi, uphizi (kuphekwe), u-anyanisi oluhlaza (oqoshiwe), iparsley (oqoshiwe), isinaphi we-Dijon, i-oyili yomnqumo, uju, isosi soya (uSen Soy I-Classic Pepper), ujusi kalamula, ujusi wewolintshi
isigaba: Amasaladi weLentil
ilensi (okuluhlaza okotshani), i-olive yama-olive, u-anyanisi (oqoshiwe), utamatisi (osikiwe futhi osikiwe), usawoti, upelepele, iparsley (imifino eqoshiwe), ujusi kalamula, izindandatho zika-anyanisi, i-parsley eqoshiwe, izingcezu zikalamula.
Isaladi lamazambane elinama-Red Lentils
amazambane, udali (obomvu), u-anyanisi oluhlaza, ugarliki, uviniga wezithelo, usawoti, upelepele, lwesinaphi, uwoyela (kusuka ku-germ kernels)
isigaba: Amasaladi amazambane, amasaladi weLentil
udali (ubilisiwe), u-anyanisi oluhlaza, i-apula (omuncu), umvimba (inyama), u-anyanisi (obomvu), ushizi, iparsley, umhluzi wemifino, lwesinaphi (okushisa okuphakathi), uju, upelepele, usawoti
Ividiyo (chofoza ukuze udlale).
isigaba: Ama-salads avela ku-lentils, ama-salad we-Meat
Isaladi elifudumele ne-lentils, inkukhu ne-broccoli
i-lens, i-broccoli, i-garlic, i-mustard yesiNgisi (i-powder), uviniga we-balsamic, i-olive yama-olive, u-anyanisi (obomvu), ibele lezinkukhu (libhemile)
isigaba: Ama-salads avela enkukhu, ama-Salads avela ku-lentil
Isaladi leLentil noCelery
ilensi ansundu noma eluhlaza okotshani, izaqathe, u-anyanisi, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi (Isiqu esingu-20 cm ubude), imayonesi, upelepele omnyama (umhlabathi)
Isaladi ngebele ledada namakhala
i-lentil, isifuba sedada, i-sherry eyomile, isoso le-soya, isaladi eluhlaza, utamatisi (omncane), uwoyela we-olive
isigaba: Isaladi ledada, amasaladi weLentil
Isaladi ye-Turnip enamaLentils
itheniphu, udali (ubilisiwe), ulethisi, uphizi oluhlaza (ubhontshisi), i-dill, imayonnaise, ukhilimu (ushayiwe), i-ketchup eshisayo, ujusi kalamula, ama-apula (i-acid yashizi), usawoti, upelepele (umhlabathi)
isigaba: Amasaladi wemifino, amasaladi weLentil
Isaladi le-Buckwheat neLentil
umhluzi wemifino, i-lentils eluhlaza (hlanza bese ukhipha amanzi), uwoyela we-olive, u-anyanisi (osikiwe), isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi (oqoshiwe), izaqathi (oqoshiwe), u -galikhi (oqoshiwe), isithokelo, i-oregano noma i-marjoram (eyomile), i-thyme (eyomile) , ikhumini (umhlabathi), upelepele obomvu (umhlabathi), iqanda, i-buckwheat, uwoyela womnqumo, usawoti, uviniga wethebula
isigaba: Amasaladi avela kulenti, amaSaladi avela ezinhlolweni
Isaladi leLentil elineHaddock
ilensi eluhlaza, i-haddock, u-anyanisi, amakhambi, ama-clove, ubisi, usawoti, i-pepper (okusanhlamvu), lwesinaphi, uwoyela omnqumo, uviniga, usawoti, upelepele, iparsley
isigaba: Ama-salads wezinhlanzi, amasaladi weLentil
Isaladi leLentil nge-anyanisi Fries
i-lentil, i-rosemary, iqabunga le-bay, amazambane (abilisiwe), utamatisi, uviniga, uviniga wewayini, isiphuzo selamula, uwoyela omnqumo, usawoti, upelepele omnyama (umhlabathi), imbewu ye-caraway, i-zest, iparsley, u-anyanisi, uwoyela we-sunflower
Isaladi le-Lentil ngama-apricots omisiwe
udali, ama-apricots omisiwe, u-anyanisi, i-walnuts (ehlutshiwe), usawoti, upelepele, uwoyela wemifino, i-coriander (imifino)
Isaladi, uBhontshisi nePea isaladi
ubhontshisi, uphizi (owomile), udali, u-anyanisi, uwoyela wemifino, usawoti, upelepele omnyama (umhlabathi), ugalikhi
isigaba: Ama-salads aqhamukela ku-peas, ama-salads avela ku-lentils, ama-salads abhontshisi
Ithanga Isaladi ngamaLentils
ithanga (umhluzi), udali, i-arugula, ushizi wembuzi, ibhotela, iparsley, i-olive olive, uviniga we-apple cider, ujusi kalamula, i-adjika eluhlaza, lwesinaphi (enezinhlamvu), upelepele omnyama (umhlabathi omusha)
isigaba: Ama-Lentils, ama-Pumpkin Salads
Isaladi leLentil ne-Mushroom
ilensi eluhlaza, amakhowe amasha (amakhowe e-oyster, ama-champignons), i-parmesan, amakhowe omisiwe, iparsley (nengulube), i-leek, i-garlic (insizwa), umhluzi wemifino, iwayini elibomvu elomile, i-olive olive, i-oyela yemifino, ibhotela, upelepele omnyama (umhlabathi omusha) ), usawoti wolwandle
isigaba: Amasaladi avela ku-lentils, amasaladi Mushroom
Isisindo sokuqanjwa: 100 gr
ukwakheka: 205 kcal
Amaprotheni: 8 gr
UZhirov: 10 gr
Ama-carbohydrate: 20 gr
B / W / W: 21 / 26 / 53
H100 / C0 / B0
Isikhathi sokupheka: 1 h
Sithatha imikhiqizo yokulungiselela isaladi le-lentil elimnandi ngokuya ngohlu, imifino yami namakhambi.
Sigeza izimbambo kaninginingi ngaphambi kokupheka, bese sithela izingilazi ezimbili zamanzi ngesisekelo sengilazi yezilazi engilazini ye-lentili, bese sivutha umlilo.
Pheka ama-lentil kusukela ngesikhathi sokubilisa isigamu sehora ekushiseni okuphansi, ukumboza ipani ngesivalo.
Ngenkathi amaloyili ephekiwe, silungisa ezinye izithako: usike u-anyanisi izindandatho zekota ezondile.
Thela u-anyanisi oqoshiwe ngamanzi abilayo.
Faka uviniga ku-anyanisi emanzini abilayo, hlanganisa bese ushiya imizuzu eyi-10.
Ekupheleni kokupheka ama-lentil, usawoti bese emva kwemizuzu engu-5 ucisha umlilo. Amanzi avela ku-lentil azobilisa ngalesi sikhathi, ama-lentil ayobe elungile.
Faka amalensi aphekwe esitsheni bese uwadedela ngokuphelele.
Upelepele uyabhekwa bese unqunywa kube yimichilo emincane.
Gaya imifino ngommese.
Sika utamatisi sibe ngama-cubes amancane.
Ushizi onzima uthathe ama-cubes amancane.
Silahla u-anyanisi oqoshiwe ku-colander, sidedele
Lapho i-lentil ebilisiwe selehlile, engeza zonke izithako ezisikiwe esitsheni, usawoti ukunambitha bese ukhonga isaladi ngamafutha zemifino.
Hlanganisa isaladi le-lentil bese uyifaka endishini yesaladi noma ematsheni ahlukanisiwe.
Sikhonza isaladi elihlwabusayo nelilula lamakhala, sihlobisa ngamahlamvu aluhlaza.
Izindlela zokupheka ezifanayo
Ukwenza i-radish tastier kwisaladi ...
Isithombo ku-isaladi kuzoba tastier uma uyixubanisa anyanisi, ngaphambili othosiwe ku-oyela yemifino.
Ungayifaka kanjani isaladi.
Kuyadingeka ukugcwalisa isaladi ngamafutha zemifino lapho kuvela khona usawoti, uviniga, upelepele.
Ukuvimbela iphunga leklabishi elimhlophe.
Njengoba wazi, iklabishi elimhlophe ngesikhathi sokupheka lisusa iphunga elingelinhle kakhulu elizungeze lona. Ukuvimbela ukuvela kwaleli phunga, udinga ukubeka isibhakabhaka epanini elineklabishi elibilayo ...
Ukususa ukudabuka ku-anyanisi ...
Ukunambitheka kwe-anyanisi eluhlaza kusaladi kuzoba mnene futhi kube mnandi uma u-anyanisi osikiwe izingcezu ufakwa ku-colander futhi ugcotshwe ngamanzi abilayo. Lonke ulaka oluvela emnsalweni luyohamba.
Ngakho-ke izaqathe zithakwa kangcono.
Uma ulungiselela isaladi ngezaqathi ezigayiwe, qiniseka ukuyivuna ngamafutha yemifino, ngoba i-carotene equkethe izaqathe iyancibilika kuphela kuyo. Ngaphandle kwalokho, izaqathe emathunjini aku ...
Ungapheka kanjani ama-beet ngokushesha
Ukuze ama-beets apheke ngokushesha (abe uthambile), udinga ukuwabilisa kuze kufike lapho ubheka khona ngemfoloko, kusenolaka oluncane, ususe emlilweni bese uthela amanzi abandayo kakhulu. AmaBets azothamba ...
Ukwenza i-sauerkraut isaladi tastier ...
Isaladi le-Sauerkraut lizoba tastier uma esikhundleni sama-apula amasha abeka izingcezu ze-mandarin noma i-orange.
Okuqukethwe kwekalori kokudla okungenzeka kusitsha
Utamatisi - 23 kcal / 100g
I-pepper emnandi - 27 kcal / 100g
I-basil entsha - 27 kcal / 100g
I-basil eyomile - 251 kcal / 100g
I-Peppermint - 49 kcal / 100g
Iminti entsha - 49 kcal / 100g
Iminti eyomile - 285 kcal / 100g
IParsley - 45 kcal / 100g
Dill Greens - 38 kcal / 100g
I-anyanisi - 41 kcal / 100g
Uwoyela sunflower - 898 kcal / 100g
Amafutha we-sunflower ekhanyisiwe - 899 kcal / 100g
Usawoti - 0 kcal / 100g
Iviniga lethebula - 11 kcal / 100g
Ama-Green Lentils - 323 kcal / 100g
Okuqukethwe kwekhalori kwemikhiqizo: Olovini oluhlaza, i-Bell pepper, Utamatisi, u-anyanisi, uviniga wethebula, i-Basil, i-Mint, i-Dill, i-Parsley, i-sunflower oil, iSawoti
Amagilebhisi angabhekwa njengomkhiqizo owenziwa endaweni yonke. Okokuqala, ayibizi kakhulu, kanti okwesibili, ngokungafani nezinye izinhlobo zemidumba, iyashesha futhi kulula ukuyipheka. Akumangazi ukuthi abalandeli bokwezinhlobo ezahlukahlukene zokudla bangathola izindlela zokupheka ezifanelekileyo zezitsha ze-lenteli, kufaka phakathi isobho, amasaladi, ukudla okulula kanye nezinye izitsha.
Izinzuzo ezingathandabuzekiyo zamalobolo ukuthi ithatha kalula amakha ahlukahlukene kakhulu eminye imikhiqizo nama-seasonings, inenani elicebile lokudla okunempilo, futhi iyatholakala unyaka wonke.
Izidlo ezinamalenti ngaphezu kokugcwala kwazo nazo zilusizo olukhulu kakhulu. Ngemuva kwakho konke, ama-lentil angumthombo omuhle kakhulu wemicu esiza i-cholesterol ephansi. Izidlo ezinamalensi, izindlela zokupheka ezahlukahlukene kakhulu futhi ziningi, kunconywa ukuthi zengezwe ekudleni kwakho okujwayelekile nakubantu abane-ushukela wegazi ophakeme, ngoba kuvimbela amazinga kashukela ekukhuphukeni ngemuva kokudla. Uma lokhu akwanele ukuthi umuntu aqale ukufuna izindlela zokupheka ezivela kulo mkhiqizo wesimangaliso, khona-ke kufanelekile ukusho ukuthi ama-lentils angumthombo omuhle kakhulu wamaminerali namavithamini e-B.
Lithini inani lamakhalori wale ngcebo yokudla nokondla? Okunye futhi! Ingilazi ye-lentil iqukethe amakhalori angama-230 kuphela. Ngasikhathi sinye, ama-lentil aboniswa ngokuqukethwe okunamafutha amancane, ngakho-ke lawa makhalori abaluleke kakhulu kumaphrotheni nama-carbohydrate.
Ama-salads anama-lentil atholakala ngempela kulabo abathanda ukubhala kakhulu izindlela zokupheka ezisindisa inhliziyo nezinesikhathi kwincwadi yabo yokupheka.
Uma unakekela ukupheka i-lentil kusengaphambili, khona-ke ukulungisa isaladi ngeke kukuthathe imizuzu engaphezu kwama-30. Ngasikhathi sinye, indawo ebekelwa amandla etholakala engxenyeni encane kakhulu izokwanela ukuze kungabi nemizwa yendlala engakushiya okungenani amahora ambalwa.
Nakani ezinye izindlela zokupheka ezithokozisayo:
Uyemukelwa kwisiza sami! Sengisebenze njengompheki iminyaka engaphezu kwe-10 manje. Okukhethekile engikuphethe izitsha ezibandayo kanye nemililo. Kumkhuba wami, kwakukhona amakhulu izitsha ezahlukene, ukukhumbula iresiphi kanye nencazelo yalo kunzima kakhulu. Ngokusekelwe kulokhu, umbono uqhamuke wokwenza lo mthombo, oqukethe izindlela zokupheka ezivela kulo lonke inethiwekhi, lapho wonke umuntu angathola khona lokho akuthandayo.
Ukudla okungenamsoco kusidingo esandayo. Ngempela, akusizi ukugcina umzimba wakho usesimweni, kodwa futhi nokuqapha ngokungakhathali ukudla okudla, ukuze umzimba uzizwe umkhulu.
Ukudla okunempilo kufanelekile kulabo abanezinkinga zokukhuluphala ngokweqile, impilo, ngokwesibonelo, ngesimo sesisu esigulayo (i-gastritis nezinye izifo ezihlobene), noma nesikhumba. Ukudla kusiza ukubuyisela umzimba emzimbeni nasekuwugcineni usesimweni.
Ukudla okungenamsoco akusho ukuthi ukwenqatshwa ngokuphelele kwamafutha nama-carbohydrate, kepha kunciphisa ukusetshenziswa kwawo emisebenzini efanelekile. Ukudla kubuye kudle okunye ukudla okunye okusebenzayo. Isibonelo, ushukela ungafakwa esikhundleni sezithelo ezinambitheka ngokulinganayo okumnandi, kepha zilethe izinzuzo eziningi emzimbeni.
Kubalulekile! Konke kufanele kusondele kukho ngokuhlakanipha, ngoba ngokuzifaka ohlakeni futhi wenqabe umkhiqizo obalulekile, ungalimaza impilo yakho.
I-Vegetarianism iyindlela yokudla. Kodwa-ke, kufanele ubone umehluko phakathi kokudla imifino ne-veganism. Ama-Vegans anikela ngayo yonke imikhiqizo yezilwane, amanye aze noju. I-Vegetarianism ifomu elilula elizokufanela cishe wonke umuntu, ngoba alisho ukuthi unya olunjalo ngokwenqaba lokhu noma lokho kudla.
Lapho ufudukela imifino, kufanele wazi ngokuphelele ukuthi yini okufanele uyilahle. Imvamisa, lolu hlobo lokudla alusizi labo abangekho ezingeni lengqondo elungele ukuyeka ukudla imikhiqizo yezilwane. Impilo iphenduka ekubeni yinto ejwayelekile. Ngakho-ke, uma uthatha isinqumo sokuba ngumlimi wezitshalo, qala ngokuqala ngekhanda lakho, ukala konke okuhle nokubi.
Izindlela zokupheka ezidumile ngezithombe
Lolu hlobo lwesaladi lufuneka kakhulu phakathi kwama-imifino kanye nama-vegans, ngoba awudingi ukuchitha isikhathi esiningi nomzamo wokulungiselela, futhi umphumela uhlala kuze kube okulindelwe. Futhi, lesi sidlo sinenhliziyo enhle, ngoba abangakwazi ngisho nokufaka izitsha eziphambili.
Ama-Lentils aqukethe umthamo omkhulu wamaprotheni ongangena esikhundleni sezitsha eziningi nemikhiqizo. Futhi amaprotheni abaluleke kakhulu emizimbeni yethu, ikakhulukazi lapho enqaba imikhiqizo yezilwane equkethe.
Ama-Lentils anezinhlobo eziningi. Ngayinye yazo ihlukile komunye ekunambithekeni nasekungaguquguquki ngesikhathi sokupheka. Zonke izinhlobo zelensi zilungele amasaladi, noma kunjalo, kungcono ukukhetha okuluhlaza, ngoba noma ngabe upheka uzogcina ukwakheka kwawo nobulukhuni besihlobo, okudingeka kumasaladi.
Isaladi ingafakwa ngokufudumele nokubandayo. Isitsha lesi silungele kokubili imifino kanye nama-vegans, ngoba ayinayo imikhiqizo yezilwane. Isaladi inenhliziyo enhle kakhulu futhi inempilo.
ilensi - 300 g
izaqathe - 100 g
upelepele omnyama - 1 tsp,
anyanisi (u-anyanisi obomvu) - 60 g,
ugarliki - ukunambitha (okungcono cishe i-10 g),
i-curry - 1 tsp,
uwoyela sunflower - 2 tbsp.
Isikhathi sokupheka: cishe imizuzu engama-30.
Hlanza ama-lentil. Ubilise imizuzu engama-25 kuze kube yilapho ithambile.
Qoba u-anyanisi, usike ugarliki, bese ubilisa izaqathe.
Pheka gazinga: gazinga u-anyanisi, ugarlic kanye izaqathe emafutheni. Kwenze cishe imizuzu emi-5.
Govuza ama-lentil kanye nefry.
Faka izinongo ukunambitha.
Indishi isilungile, ingakhonzwa!
Le saladi ilungele kuphela ama-lacto-noma i-lacto-ovo-imifino, njengoba iresiphi iqukethe ushizi. Kodwa-ke, ungayisusa ohlwini lwezithako uma usafuna ukuzama isaladi lamanyele notamatisi.
anyanisi (luhlaza) - ama-2 ama-PC.,
upelepele obomvu - 1/4 tbsp.,
iparsley - 1 isipuni,
i-arugula - 1/3 Ubuciko.,
utamatisi (cherry) - 150 g,
ushizi (imbuzi ehamba phambili) - 30 g,
amafutha e-olive - 1 tsp,
uviniga (ibhalsamu) - 1 tsp,
upelepele omnyama ukunambitha
uju - 1 tsp
Isikhathi sokupheka: imizuzu engama-40.
Geza amaleyili. Ubilise imizuzu engaba ngu-25 kuze kuthambe.
Qoba u-anyanisi oluhlaza. Dice upelepele. Qoba iparsley.
Sika utamatisi ngesigamu. Phusha ushizi. Qoba ugarliki.
Pholisa ama-lentil. Faka u-anyanisi, upelepele, utamatisi we-cherry no-parsley kuyo. Shingisa.
Thatha esinye isitsha. Hlanganisa ugarliki, uju, uviniga webhalsamu kanye namafutha omnqumo, engeza izinongo uma ufisa. Beat ingxube ephumayo nge-whisk.
Thela i-lentil nge -xube, hlanganisa futhi.
Faka i-arugula, ufafaze ushizi.
Ilula futhi imnandi
Njengoba ushizi ungezwa kulesi saladi, ulungele ama-lacto- noma ama-lacto-ovo-imifino.
ubhontshisi oluhlaza - 300 g
ilensi - 400 g
anyanisi - isixha esingu-1,
ushizi (mhlawumbe i-feta) - 180 g,
amafutha e-olive - izipuni ezi-3,
uviniga (iwayini eliphambili) - 1 isipuni,
izimpande ze-ginger - isipande esizi-2 cm,
Geza amaleyili. Beka amanzi esitofini. Pheka insimbi. Khipha amanzi kuyo.
Gaya anyanisi, upelepele, amakhambi. Cwebe bese usika i-ginger. Sika ushizi, okungcono kube ngama-cubes.
Thela amanzi abilayo ngaphezulu kobhontshisi. Linda imizuzu embalwa kuze kube yilapho ithambile, bese uyikha amanzi.
Faka ileli ku-plate ehlukile, engeza izinongo ukunambitha. Hlanganisa nobhontshisi.
Faka u-anyanisi, upelepele.
Hlanganisa uviniga, uwoyela kanye ne-ginger. Sawoti le ngxube, engeza izinongo. Beat ingxube imizuzu eminingana.
Thela ubhontshisi kanye no-lentel ngale nhlanganisela, shiya imizuzu embalwa.
Faka ushizi namakhambi, hlanganisa.
Izeluleko Zokupheka Eziwusizo
Kunezeluleko ezithile zokulungiselela noma isiphi isidlo, usebenzisa ongalethela iresiphi ekupheleleni. Futhi isaladi le-lentil liyahlukile! Lapho ulungiselela, cabanga ngalezi zincomo ezilandelayo:
Hlanza ama-lentil emanzini eqhwa.
Lapho upheka i-lentil, kungcono ukufaka iqabunga le-bay emanzini, khona-ke umkhiqizo uzoba ocebile kakhulu futhi o-tastier.
I-Curry ihamba kahle ne-lentil, ngakho-ke ingangezwa kwisaladi enezithako ezithile.
I-grill kuphekwe kahle ngaphezulu kokushisa okuphezulu.
Isaladi singasetshenziswa njengesitsha esikhulu secala.
Uma upheka i-lentil eningi kakhulu, ungenza ama-cutlets ukusuka kwamanye.
Govuza amaleyili njalo ngemizuzu emihlanu ngenkathi kuphekwe. Kungcono ukuhambisa usawoti ngaphambi kokufaka usawoti.
Isaladi lingahunyushwa futhi ngosawoti kalamula. Ihamba kahle lentela.
Uma ukhetha ukugqoka kwalamula, ungakuxuba ne-soya sauce.
Yonke imifino kufanele igezwe kahle emanzini abandayo ngaphambi kokupheka. I-anyanisi ingashiywa ngisho emanzini imizuzu embalwa. Lapho-ke ngeke ube nokulimazeka ngenkathi uyilinganisa.
Akufanele wengeze izinongo eziningi, ngoba zivunda inkanuko.
Kulula ukudla okumnandi nokudla ngasikhathi sinye. Into esemqoka ukuzama okuningi futhi uzame ukuxuba imikhiqizo ehlukene, okubonakala sengathi, ayinakuhlanganiswa. Eminye imikhiqizo ingashintshwa ngokuphelele neminye, ibe wusizo ngokwengeziwe. Uma udla inyama kuphela ngesizathu sokuthi "ucebile ngamaprotheni", ungajabulisa - imikhiqizo eminingi nayo inothile kuyo. Isibonelo, ama-lentiladi, amasaladi avela kuwo amane angokomlingo.
Ungasisebenzisa kanjani isikhathi esithe xaxa wena nomndeni wakho, futhi ungapheki amahora amaningi? Ungasenza kanjani isitsha sibe sihle futhi sithokozise? Ungangena kanjani ngenani elincane lemishini ekhishini? I-3in1 Miracle Knife iyisizi elula futhi esebenza kahle ekhishini. Zama ngesaphulelo.
Isikhathi Sokupheka: 60
Bona ukuthi ungawenza kanjani ithanga nesaladi le-lentil. Le ndlela yokupheka inesithombe sesitsha semifino esimnandi nesinempilo, esilungele ukudliwa, amamenyu wemifino nelean mafutha. Uyacelwa uqaphele ukuthi ngesikhathi senqubo yokupheka awudingi ukufaka usawoti emifino, kule iresiphi sengeza usawoti wasolwandle kuphela kusoso. I-adjika eluhlaza ebukhali, uviniga we-apple cider nosawoti omncane - lezi zithako zanele ukunambitha ukunambitheka kwemifino. Qiniseka ukuthi uzama lokhu
isaladi enenkukhu nenkukhu
Kuzothatha imizuzu engama-60 ukupheka. Ukusuka kwizithako eziboniswe kule iresiphi, kuzotholakala ama-4 servings.
Izithako- Amaleyili aluhlaza - u-150 gr., - ithanga elinepulangwe - 400 gr., - ulethisi - i-150 gr., - u-anyanisi - u-80 gr., - ushizi onamafutha aphansi - u-30 gr., - ukuthosa uwoyela, - u -galikhi, isiqu se-celery , u-anyanisi, usawoti.
- i-adjika eluhlaza - i-30 gr., - uwoyela we-olive - 30 ml., - okusanhlamvu kwesinaphi - 2 tsp., - apple uviniga - 10 ml., - usawoti wolwandle ukunambitha.
Ungapheka kanjani ekhaya
Cwilisa ama-lentil eluhlaza emanzini abandayo, hlambulula ku-colander, uthele epanini. Faka ama-clove ambalwa kagalikhi, uthathe izingxenye ezine ikhanda le-anyanisi nesiqu se-celery.
Thela amalitha amanzi ayi-1.5, ulethe ngamathumba. Pheka ukushisa okuphansi kuze kuthambe.
Sihlanza ithanga eliluhlaza kusuka ku-peel, sikhafule imbewu ngesikhwama, sinqume inyama sibe amashubhu amancane.
Gcoba epanini ngamafutha zemifino ukuthosa, uphonsa ama-pumpkin epanini lokuthosa oshushu, gazinga imizuzu eminingana kuze kube yilapho uthambile futhi uthambile.
Hlanganisa u-anyanisi zibe izimpaphe ezincane ne-sauté epanini elifanayo. Ukulungiselela u-anyanisi ngokushesha, ungafafaza nge-pinch kasawoti.
I-lettuce ifakwe emanzini abandayo, yomiswe ethawula iphepha noma endaweni eyomile.
Faka amaqabunga aluhlaza epanini, bese udali, ama-pumpkin cubes kanye no-anyanisi othunyelwe.
Sigcoba ushizi onzima we-nonfat ku-grater enhle, ufafaze imifino.
Ukuze ugqoke, hlanganisa i-adjika eluhlaza nosawoti, uwoyela omnqumo kanye noviniga. Fry imbewu yesinaphi epanini elomile, engeza ku-isoso, hlanganisa kahle. Ungasebenzisa futhi isinaphi eyenziwe ngomhluzi eyenziwe ngomumo esikhundleni sokusanhlamvu okusomile.
ithanga isaladi nge lentils
ngesoso bese ukhonza ufudumele.
Ama-Lentils aphelele ekudleni kokudla, nezitsha zokudla okwenziwe ngemifino (kanye ne-vegan) kanye nokuzila ukudla kwama-Orthodox. Inothile ngamaprotheni futhi ingabamba inyama okwesikhashana.
Ngaphandle kokupheka lens, isaladi liphekiwe ngokushesha okukhulu. Kuvela okumnandi futhi kubukeka-kumnandi, futhi okubaluleke - okunempilo futhi kunempilo. Isifiso sokudla!
ilenti eluhlaza - 1 inkomishi
I-pepper bell - 1 Isiqephu
isiqu se-celery - izingcezu ezi-3-4 (petiole)
Noma yimiphi imifino - Gram (ukunambitha)
Isinaphi sasePoland - 2 amathisipuni
ulamula - izingcezu ezi-1/2 (ujusi)
amafutha e-olive - 3-4 tbsp. nezinkezo
usawoti, upelepele - igremu
Ukuhlinzekwa Ngesiqukathi: 4
Ungayipheka kanjani i- “Dietary Green Lentil Salad”
1. Lungisa izithako.
2. Geza amaleyili bese uwapheka ngamanzi anosawoti. Thela amanzi. Izinhlobo ezahlukahlukene zelenzi ziphekiwe ngokuhlukile. Imvamisa, isikhathi sokupheka sikhonjiswa kwiphakheji. Imayini ibilungile ngemizuzu engama-20.
3. Sika upelepele kanye no-celery.
4. Hlanganisa lwesinaphi, kalamula kanye namafutha omnqumo. Faka yonke imikhiqizo endishini yesaladi, engeza upelepele omnyama kanye namakhambi, okuthandayo, uthele usoso uxube. Faka usawoti uma kunesidingo.
Kuthunyelwe ngumqondisi kuma-Turn-based Cooking Recipes 09/20/2018 173 Views
Le isaladi elula inambitheka kakhulu futhi igculisayo sibonga i-legumes ekwakhekeni. Amakhambi amasha kanye nojusi kalamula enza isidlo sibe nephunga ikakhulu futhi siphundwe.
Le iresiphi ayinayo imikhiqizo yezilwane, ngakho-ke ilungele abantu abasebenza imifino nabantu ekudleni noma ngokuzila ukudla.
Ngaphezu kwalokho, ungangeza iminqumo eluhlaza noma iminqumo, utamatisi we-cherry, upelepele wensimbi, uthathe izindandatho, kwizithako eziphambili. Ngeresiphi, imvamisa ngisebenzisa i-lentes eluhlaza okotshani noma onsundu.
Okuqukethwe kwekhalori kwesaladi kuyinto ngokulinganisela impela, ungakusipha noma isidlo sakusihlwa. Uma uthanda amasaladi athakazelwayo okusanhlamvu, nansi enye isaladi enama-umzala wesampula.
Geza amaleyili kahle emanzini abandayo, uwashintshe kaningana ukuze uwahlanze. Thela amanzi ashisayo bese usetha ukubilisa ngaphezulu kokushisa okuphakathi. Ngemuva kokubilisa, engeza ingcosana kasawoti bese uqhubeka nokupheka kuze kuthambe. Kuzothatha imizuzu eyi-15 ukuya kwengama-20. Qikelela ukuthi ama-lentils awapheki futhi aboshwe. Abanye omama abasemuva bangenisa i-lentes emanzini abandayo ukuze ikhukhumeze futhi ipheke ngokushesha. Kodwa angikwenzi, njengoba esheshe afinyelele ukulungela. Thela amanzi bese upholisa insimbi ephekiwe ekushiseni kwamakamelo.
Bilisa pasta kuze kuphekwe. Ukuze zinganamatheli ndawonye, ​​zibilise ngenani elikhulu lamanzi ngokufakwa kukasawoti kanye namafutha zemifino. Landela imiyalo esephaketheni ukugwema ukugaya umkhiqizo. Ngemuva kwalokho nge-pasta elungiselelwe, usawoti ngamanzi ashisayo. Faka kubo esitsheni esomile bese uthela inani elincane lamafutha omnqumo.
Hlukanisa i-iparsley ngeziqu. Geza bese usula amaqabunga, bese uwaquma kahle ngommese. Geza izimpaphe zika-anyanisi oluhlaza bese uwaquma emasongweni amancane.
Esitsheni esijulile, hlanganisa zonke izithako zesaladi: i-lentil, pasta kanye nemifino. Thela izithako ngejusi kalamula, kuzonikeza isidlo ukumuncwa okumnandi. Faka isipuni ezimbalwa samafutha omnqumo ne-paprika yenhlabathi ukuze ubeke ubumnandi.
Hlanganisa isaladi bese ulidedela isikhashana ukuze izithako zigcwele nephunga lokuluhlaza.
Ngemuva kwemizuzu eyi-10, isaladi lethu le-lentil lizokhela futhi lilungele ukudliwa. Ngaphezu kwamafutha omnqumo nejusi kalamula, ungangeza isoso elincane le-soya neviniga yebhalsamu ku-salad dress.
Ngiyajabula ukukubona esizeni sami! Ngithanda kakhulu ukuhlala ngisesimweni esihle somzimba futhi lokhu kubhukwana lami lokuqongelela izindlela eziningi engiziqoqe kuyo yonke imithombo engakwazi ukuyithola. Manje ngizojabula ukwaba izinto zami zokwakha abafundi bami.
Ushizi kanye nesaladi kaLentil
Isaladi elinoshizi we-feta kanye no-lentel linikeza iphalethi lokunambitha, kufaka phakathi ubukhali nobumnandi be-anyanisi we-Yalta, usawoti we-feta ushizi, ujusi wamatamatisi nopelepele wensimbi. Ezilinganisweni zonke lentils abilisiwe. Akanakho ukunambitheka kwakhe okukhulunywayo, okuwukumifino.
Isaladi leLentil ngeBeetroot
Iresiphi yezinsimbi ezinama-beet kungaba enye indlela ye-vinaigrette yendabuko. Ngokuvamile, le isaladi engenhla ingalungiswa nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, kodwa, ngombono wami, ilungele kakhulu ebusika. Ngokugqoka isaladi, ngasebenzisa uviniga webhalsamu.
Ngifunde okuningi ngokubaluleka kwezithombo, kodwa angikaze ngizizame. Nginqume ukuthi kungcono ukukwenza nokuzisola kunokuthi kamuva ngizisole ngalokho okungazange kwenziwe. Ngabheka imigqomo yami, i-lentils - ukuphela kwento ongazama ukuyikhulisa. Ngakwenza futhi angizisoli ngakho.
Isaladi le-Rentil Rice
isigaba: Amalambu weLentil
amazambane, ilenti ebomvu, ushizi, ugalikhi, uviniga, usawoti, upelepele, lwesinaphi, uwoyela (kusuka kwimbewu yamagciwane)
Isipinashi neLentil Apple Salad
i-lentil, i-marinade yemifino, upelepele (omisiwe), i-thyme (eyomile), isipinashi (amaqabunga), i-apula (omuncu), uviniga we-apple cider, ukhilimu omuncu, usawoti, upelepele omhlophe, uwoyela sunflower, utamatisi, uviniga we-balsamic
isigaba: Isaladi leSpinach, Amaladi weLentil
Isaladi Esishisayo Lentil
i-lens, i-Cardamom, i-broccoli, ushizi we-feta, uwoyela womnqumo, uju (uketshezi), upelepele wethanga (omncane oshisayo), uviniga, usawoti, upelepele, u-anyanisi oluhlaza
isigaba: Amasaladi weLentil, amasaladi weCereal
I-Novopen 4 isaliti ipeni okuyi-insulin
Iporridge ye-pancreatitis: ongakudla, imithetho yokupheka, enqatshelwe
Uma ushukela wegazi 25
I-Bangi microangiopathy - kuyini, imbangela, ukuxilongwa nokwelashwa
Izithelo zohlobo 2 sikashukela
I-Ginkgo Biloba - imiyalo yokusebenzisa, izakhiwo eziwusizo, izinkomba kanye ne-contraindication
Iwebhusayithi yeNanotechnology # 1 eRussia
Imitha kashukela we-glucose engabonakali - inganekwane noma iqiniso? I-glucometer engahlaseli - ukukala ushukela wegazi ngaphandle kokulimaza isikhumba. ...
Kwenzekani nge-hypofunction ne-hyperfunction ye-pancreas
I-Propolis yesifo sikashukela
Ngingakwazi ukuthatha i-Analgin neParacetamol ne-Aspirin ngasikhathi sinye?
ImithiIsifo sikashukelaIsifo sikashukela kubantu besifazaneOkunyeUkunakekelwaUkudla ngesifo sikashukelaUkwelashwa nokuvimbelaInsulinI-Dummy DiabetesicsImibuzo
Kungenzeka yini ukuthi udle izinsuku zabanesifo sikashukela?
Uyini umehluko phakathi kweReduxin neGoldline? Imaphi amaphilisi wokudla angcono - i-Xenical and Reduxin
Indawo mayelana nengadi, ikotishi nezitshalo zasendlini
I-Pozner mayelana nokwelashwa ushukela kanye nesifo sikashukela eRussia: ividiyo
Imiklamo eyi-9 engcono kakhulu engahlaseli yegluecometer
I-Yanumet: ama-analogues, imiyalo yokusebenzisa, ukwakheka nokubuyekezwa